nepaldoor.com: ममताले फेरिन् साझाको रुप
अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धक
-मदन कोइराला -
झट्ट हेर्दा साझा प्रकाशनको अध्यक्ष भन्दा पनि कुनै उद्योगको मालिकजस्तो लाग्छ । हरेक समय हसिली । बोलीमा शालिनता र विनम्रता । सधै ठूला ठूला योजनाको छलफलमा व्यस्त । गफिरहेका बेला पानपरागको एक फाको मुखमा हालेर लौ भनिस्यो, हजुर त हाम्रो देउता । साझा प्रकाशन लेखक कविको मन्दिर हो । यहाँ लेखक कवि नामका भगवान बस्छन् । त्यो तपाइहरु नै हो । हातका प्रायः सबै औलामा औठीधारी यी महिलाले बोल्दा हिन्दी फिल्मको पुरानो हिरोइन जस्तो पनि लाग्न सक्छ ।
एउटी महिला । यो त उनलाई भन्नै हुन्न । माओवादी जनयुद्ध चर्किएको बेला एमालेको राजनीति गर्थिन । कानुनी पेशा छँदै थियो । सप्तरी जिल्लाको निर्वाचित बार अध्यक्ष त्यो पनि तीन तीन पटक । राजनीतिक परिवर्तनसंगै तराईमा पनि राजनीतिले कोल्टे फे¥यो अनि ममता झाले पनि फेरिन पार्टी । भइन मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिककी नेता । प्राज्ञिक परिवारकी चेली ममतामा साहित्यको रस त थियो नै । जीवनमा सबै भन्दा सम्मान गर्ने गरेको क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने जिम्मा आइपर्यो । गुमाइनन् अवसर ।
अहिले बजेट बहसको समय छ । ममतालाई साझा मुलुककै धनी सरकारी संस्था बनाउनु छ । सरकारले धेरै भन्दा धेरै आर्थिक विनियोजन गरिदियोस भन्ने छ । ‘यसको अर्थ हामी सधै सरकारको मुख ताकौे र आत्मनिर्भर हौँ भन्ने होईन् । साझालाई आफ्नै खुट्टामा उभ्याउनु मेरो अर्को सपना पनि हो’ उनले आफ्ना योजनाका पोकाहरु एकपछि अर्को फुकाइन । अनि सुनाइन् सफलताका मीठा कथा । ममता साझामा पुगे पछि देख्नेहरुका लागि थुप्रै सफलताका कथा बनिसकेका छन् ।
तर यता साझाकै केही हिस्सेदारहरु सरकारलाई बजेट नछुट्याउन दवाव दिदैछन् । ममतालाई यो देखेर दिक्क भन्दा पनि हाँसो उठ्दोरहेछ । व्यक्तिलाई असफल पार्न संस्थालाई ढालेर भोली यी मान्छेहरु कहाँ जालान । घर जलाएर खरानीको आगो ताप्ने प्रवृत्ति साझामा पनि उनले देखिन ।
साझालाई कायपलट गर्नु उनको सपना । के फाइदा छ साझालाई माथि उठाएर ममतालाई । उनी भन्छिन् ‘आम लेखक कविको बीचमा मेरो चर्चा हुने छ । म आफै लेखक होइन तर साझाका कारण नेपाली वाङमयको विकास इतिहासमा म पनि देखिने छु’, आफ्नो लोभको गुह्य यसरी खोल्छिन उनी ।
लेखक कविलाई पूर्ण र अर्धकालीन लेखनवृत्ति दिएर राम्रा कृति लेख्न लगाउने सपना देख्दैछिन् उनी । सम्भव कसरी छ ? उनीसंगै छ उपाय पनि । पाँच करोड स्थायी कोष निर्माण गर्ने र त्यसकै व्याजबाट लेखनवृत्ति दिने ।
तीज होस या होली वा अन्य कुनै पर्व, साझामा भोज भइहाल्छ । ममता ढुक्कछिन् । पिताजीले कमाएको सम्पती छदैछ । त्यसमा पनि छोरो अमेरिकामा । अब किन चाहियो आफ्ना कर्मचारीलाई भोज ख्वाउन साझाको पैसा । मन भए सबै पुग्छ । यतिमात्र होईन घरमा हुने ससाना पूजाआजामा सिंगो साझा आउनै पर्छ ।
ममताको यो उदारता, यो उल्लास मनलाई पनि साझाका कर्मचारीले सम्मान गर्न किन चुक्थे । उनले साझा सम्हालेको केही महिनामै कर्मचारीले गरे उनको अभिनन्दन । कर्मचारी र हाकिमका बिचको सम्बन्धको दृष्टान्त ममताको छोरीको विहेमा देखियो । अचम्म, अध्यक्षको छोरीको विहे भोज खान राजधानी बाहिर शाखाबाट कर्मचारी राजधानी आए ।
यँहा आफुले त केही नगर्ने प्रबृत्ति छँदैछ । केही गर्न चाहने मानिसका लागि पनि सहज छैन । आफूपनि केही नगर्ने र अरुलाई पनि केही गर्न नदिने प्रवृत्तिका कारण नेपाल आज यो अवस्थामा पुगेको मान्नेहरु धेरै छन । सधैं राजनीतिक संक्रमणलाई बहाना बनाएर मुलुक सिद्धाउनेहरुको हुलमा कोही मुलुक बनाउनेहरुपनि भटिदाँ रहेछन । मुलुककालागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना भएका मानिसपनि हाम्रो देशमा नभएका भने होइनन् । तर, त्यस्ता मानिसहरुले कहिलेपनि अवसर पाएनन् अवथा अवसर पाएपनि उनीहरुलाई काम गर्न दिइएन् । मुलुकको जुनसुकै क्षेत्र लथालिंग भइरहको अवस्थामा सरकारको पुर्ण स्वामित्वमा रहेको साझा प्रकाशन भने अहिले प्रगतिको पथमा अगाडि बढेको छ ।
नेपाली भाषा साहित्यको उत्थान गर्न स्थापना भएको प्रकाशन स्थापना भएयता कै सबैभन्दा राम्रो अवस्थामा आइपुगेको छ । गोरखा प्रकाशनी तथा नेपाली भाषा प्रकाशनिको अन्तिम रुपमा रहेको साझा प्रकाशनको सय वर्षभन्दा लामो इतिहासमा साझा प्रकाशनले अहिले साहित्यकारलाई सम्मान गर्ने र साहित्यिक कृति प्रकाशन गर्ने क्रममा आफूलाई अग्रस्थानमा राखेको छ । सय वर्षको इतिहास भएको प्रकाशनको नेतृत्वमा पुग्ने प्रायः सबै साहित्यिक पृष्ठभुमि भएका व्यक्तिहरु नै थिए । तर उनीहरुले कहिले पनि साझा प्रकाशनलाई उन्नतिको पथमा लैजान सकेनन अथवा लैजान दिइएन् । तर, व्यक्तिमा इच्छा शक्ति भयो भने के कुरा असंभव हुन्छ भन्ने प्रमाणित गरेकी छन, ममता झाले ।
सधैं निरासाजनक मात्र समाचार सुनिरहेको बेला तपाँईलाई यो समाचारले पक्कैपनि केही सकारात्मक सन्देश दिन्छजस्तो लागेको छ ।
माथि नै उल्लेख गरियो सय वर्षलामो इतिहास भएको साझा प्रकाशनमा अहिले सम्म नेतृत्वमा पुगेका प्राय सबैजसो साहित्यक पृष्ठभूमि भएकाहरु नै थिए । साझा प्रकाशनको स्थापना पनि नेपाली साहित्यलाई जगेर्ना गर्न, साहित्यक पुस्तकलाई संरक्षण गर्न तथा साहित्यकारलाई हौसला प्रदान गर्न हो । किनभने साहित्यकार मुलुकका गहना हुन् । साहित्यकारले साहित्यका माध्यमबाट देश बनाउन र विश्वमा चिनाउन ठुलो भुमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् ।
तर अहिलेसम्म साझामा पुगेको नेतृत्वले प्रकाशनलाई उन्नति हुने किसिमले उल्लेख्य काम गर्न सकेको थिएन । यही अवस्थामा आजभन्दा झण्डै साँढे तीनवर्ष पहिला साझा प्रकाशनको नेतृत्व गर्ने अवसर ममता झालाई जु¥यो । साहित्यप्रति रुची भएपनि पेशाले पुर्णरुपमा कानुन व्यवसायी झा तीनवर्ष पहिला साझाको नेतृत्व सम्हाल्न पुग्दा प्रकाशन बेहाल अवस्थामा गुज्रिरहेको थियो । ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्रकाशनले अहिले साँढे तीन वर्षको अवधीमा थुप्रै यस्ता प्रगति गरिसकको छ, जसले साझालाई दीर्घजीवि बनाउन अहम् भुमिका खेल्दैछ ।
साझको इतिहासमा पहिलो महिला अध्यक्ष ममता नै हुन पुगिन । राजनीतिको भगबण्डामा साझाले नेतृत्व प्राप्त गर्ने गरेको छ । अध्यक्ष र महाप्रबन्धक दुई पदका लागि कहिले भागबण्डामा दुई पार्टीका व्यक्तिलाई लगिन्छ त कहिले एकै पार्टीका अध्यक्ष र महाप्रबन्धक । दुई साहित्यिक व्यक्तिलाई साझामा लाने परम्परा रहेको थियो । ममताबाटै यो परम्परा तोडियो । अहिले उनैले अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक दुवैको कुशल नेतृत्व गरिरहेकी छिन् । ममता झा साहित्यिक पाठक त हुन तर सर्जक होईनन् । गैर साहित्यक व्यक्तिले साझाको नेतृुत्व पाउदा धेरैले ओठ लेप्प्राएका पनि थिए ।साझाको नेतृत्व महिलाको हातमा पुगेको पनि यो पहिलो नै हो । ममताले साझामा व्यावहारिक र सैद्धान्तिक रुपमा इतिहास रचेकी छिन् ।
झाले आफ्नो यो छोटो कार्यकाल यति धेरै काम गरेकी छन जसको लामो फेहरिस्त हुन्छ । उनको कामबाट अत्तालिनेहरु पनि छन् र हौसिनेहरु पनि । उनको कार्यशैलीले इच्छा शक्ति सबथोक हो भन्ने प्रमाणित गर्दछ । साझा मात्र नभएर अन्य सरकारी संस्थानका लागि पनि उनी उदाहरणीय बनेकी छिन् । ममताले साझामा सजिलो गरि काम गरेकी छिन् भन्ने होइन । आज सम्म नभोगेका सास्तिहरु भोग्नु परिरहेको छ । आन्तरिक किचलो, सरकारी दवाव अनि हस्तक्षेप । अनेकन पार्टीका संगठनको गुटगत राजनीति । आजसम्म नभोगेका सबै सास्तिहरु साझाले भोगाएको छ उनीलाई । काम गर्नेलाई केले छेक्न सक्दो रहेछ र । सवल उदाहरण हुन उनी ।
ममता साझा प्रकाशनको अध्यक्ष भएर गएपछि कार्यभार सम्हालेकै दिन जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई भुक्तान गर्न बाँकी एक करोडको चेकमा हस्ताक्षर गर्नुप¥यो । ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको संस्थालाई ऋण मुक्त गर्ने निरन्तरको प्रयासमा उनी छिन् । उनी भन्दा अगाडिका महाप्रबन्धकले पुरानो व्यवस्थापनले लगाएको ऋण तिर्न नसक्ने बताउदै पदबाट राजीनामा दिए । तर झाले तीन वर्षको अबधिमा पुरानो दश करोड हाराहारिको ऋण चुक्ता गरिसकेकी छिन् । उनका पालामा जे जति काम भइरहेका छन् ती सबै नगदी कारोवार हुन । यस अर्थले पनि साझा ऋणमुक्त हुने बाटोमा अग्रसर छ ।
त्यही संस्था, तीनै कर्मचारी र त्यही संचालक समितिले विगतमा संस्थालाई ऋणमात्र बोकाएका थिए भने झाले साझामा पाइला राखेपछि एकाएक यो संस्था आत्मनिर्भर हुने प्रयासमा छ । भाषा साहित्यप्रतिको माया तथा मुलुकको गहनाका रुपमा रहेका साहित्कारको सम्मान गर्ने अवसरको रुपमा लिँदै झाले संस्थाको कायापलट गर्नसमेत सफल भइन ।
इच्छाशक्ति भयो भने एक महिलाले पनि अथाह गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण हुन झा । साझाको हविगत धेरैलाई थाहा छ । करोड मूल्यका पुस्तक परालको कुन्यू जस्तो गरि आकाश र जमिन दुवैबाट पानीको पस्ने ढल्नै आटेको टहरामा राखिन््थ्यो । आवश्यक पुस्तक भेट्नु त असभ्भव । पुस्तकको १५–२० फिट अग्लो चाङ ढलेर किच्ला भन्ने डर । यो सामान्य काम पनि पहिलाको व्यवस्थापनले गर्न सकेन । अहिले यिनैले बनाइन् नयाँ ठूला ठूला दुईवटा टहरा ।
साझा प्रकाशन सेवामुखी व्यवसाय गर्ने संस्था हो । यसको नेतृत्वले व्यापारिक सोच राख्न सकेन भने साझा अगाडि बढ्न सक्दैन । ममता यी सब कुरा बुझेरै त्यहा पुगेकी थिईन । उनेले बजार प्रतिस्पर्धी आधुनिक छपाई मेसिन थपिइन । आत्म निर्भर हुृनुपर्छ साझा भन्दै साझाबाटै कपी उत्पादनको काम सुरु गरिन । जसले साझालाई अगाडि बढाउन भरपुर सहयोग गरिरहेको छ ।
साझा प्रकाशनको मुख्य काम नै साहित्यकारका साहित्यिक कृति छपाई गर्नु हो । लामो इतिहास भएको साझामा विगतमा बढीमा ९ वटामात्र साहित्यिक कृति छपाई भएको थियो । तर, अहिले झाले साझाको नेतृत्व सम्हालेपछि वर्षको एक सय पुस्तक छाप्ने लक्ष्य राखिन । जस अनुरुप पहिलो वर्ष ५८ वटा, दोस्रो वर्ष ६४ हुदै अगाडि बढेको छ ।
झासँग कुरा गरिरहँदा यस्तो अनुभव भइरहेको थियो, उनको साहित्यप्रतिको झुकाव, सम्मानले गर्दा आज साझाले यो सफलता पाउन सकेको मात्र होइन कि सिंगो नेपाली वाङ्गंमयले विस्तारित हुने अवसर पाएको छ । उनी अहिले समावेसी पूस्तक प्रकाशनको कोष खडा गर्ने तयारीमा जुटेकी छिन् ।
एकपछि अर्को महत्वपूर्ण काम गर्दै अगाडि बढिरहेकी उनलाई असहयोग गर्नेको भीडको पनि कम छैन् । तीन वर्षको अवघिमा साझाले गरेको प्रगतिलाई सहन नसक्नेहरु अख्तियार समम पनि पुगे । नौ महिना लामो अख्तियारको अनुसन्धानले साझालाई ग्रिन कार्डमात्र दिएन पहिलो पटक अख्तियारले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन छाप्न साझालाई दियो । अख्तियारको इतिहासमा मुद्रण विभागबाट छपाईका लागि पहिलो पटक प्रतिवेदन बाहिर गएको हो । अख्तियारको निकै गोप्य मानिने हजार पृष्ठको प्रतिवेदन छाप्न पाउनुलाई झाले अख्तियारबाट पुरस्कृत भएको अनुभव गरिन् । साहित्यको क्षेत्रमा गैर साहित्यक महिलाको नेतृत्वमा यति धेरैकाम भएकोले पनि कतिपयलाई पाच्य नभएको हुनसक्छ । तर, उनको काम गर्ने इच्छाशक्तिमा कुनै कमी आएको छैन, बरु झन् हौसला मिलेको छ ।
साहित्यकारहरुले साझा प्रकाशनले कविताका पुस्तक नछापेको असन्तुष्टी प्रकट गरिरहेका बेला कर्मचारीहरुले कविता साहित्यका पुस्तक छाप्न नहुने माग गरेका छन् । साहित्यिक पुस्तक छापेर साहित्यको श्रीवृद्धि गर्ने उदेश्यका साथ स्थापित साझाका केही कर्मचारीहरु किताव छापेर संस्थालाई डुबाउन लागेको आरोप लागाउने गर्छन् । झा नियुक्त भएपछि कर्मचारीले एक हातमा स्वागतको बुके र अर्को हातमा ऋणको चेकमा हस्ताक्षर गर्दै कार्यभार सम्हालेकी झाले अहिले उक्त संस्थालाई आत्मनिर्भर बनाइन् । उनले हालसम्म करिब दश करोड ऋण भुक्तानी गरिसकेको छन् । विगतमा चार वर्षदेखि साझा पुरस्कार घोषणा गर्ने तर, रकम अभावका कारण वितवरण भने गरिएको थिएन । झाको नियुक्ती भएदेखि नै साझा पुस्रकारको राशी २२ हजारबाट बढाएर ५१ हजार रुपैंयाको बनाइयो । पुरस्कार पनि नियमित वितरण गर्न थालिएको छ । उनले संस्थालाई आत्मनिर्भर बनाउन उच्च शिक्षा परिषसँग सम्झौता गरी लिंक अंग्रेजी, हामी सबैको नेपाल, एक चिहान नाटक अहिले साझामा छापिन थालेको छ । जसले गर्दा सस्थालाई केही फाइदा भएको छ । सरकारले पनि साझालाई केही असहयोग गरेको झाको गुनासो छ । विगतमा पाँच विकास क्षेत्रमा सबै पुस्तक साझाले नै वितवरण गथ्र्यो भने अहिले मध्यमांञ्चल र सुदुरपश्चिममा मात्र साझालाई दिइएको छ बाँकी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले वितरण गर्दै आएको छ । लामो समय देखि रोकिएको कर्मचारीको पदोन्नती उनैले गराइन । एकै पटक पाँच दर्जन बढी कर्मचारीको पदोन्नती गरेर कर्मचारीको सम्मान गर्ने परिपाटीको विकासको सुरुवात उनैले गरिन ।
साझामा ममताले धेरै सपना देखेकी छिन् । अन्य मुलुकमा साहित्य र साहित्यको राज्यले ठूलो संरक्षण गर्छ । हामी कहाँ न त राज्यलाई चासो छ न त स्रष्टालाई नै ममताको अहिलेको चिन्ता यी दुवै थरिका मान्छेमा साहित्यलाई दिनुमात्र पर्छ भन्ने भावना जागृत गराउनु छ । पुस्तक छाप्न कुनै किसिमको पिरलो नहोस भनेरै उनले पाँच करोड बराबरको स्थायी पुजी जम्मा गर्नु उनको सपना हो । साझामा पुग्दा अध्यक्ष, महाप्रबन्धक र अन्य उच्च पदाधिकारी बस्ने भवन ढल्न ठीक्क थियो । पुरै कोल्टे परेको । त्यो हविगत लाई उनले तत्कालै समाधान गरिन अर्को भवनमा तल्ला थपेर । प्रशस्त भौतिक सुवित भएको साझा सधै गरिब । एउटा आधुनिक भवन नहुनु उनका लागि चुनौती नै भयो बनाइन पाँच तलाको लिफ्ट भवन । केन्द्रीय कार्यालयमा स्थायी रुपमा पानी नहुनु । सवारी साधनको तन्नम हविगत हुनु जस्ता अनेक समस्याको को गणना नै थिएन । कामको सपना देख्नुबाहेको अर्को विकल्प उनीसंग थिएन् । देखिएका तीनै सपनालाई एक एक गर्दै विपनामा ल्याउदैछिन् ममता ।
उनलाइ लखेटि रहने मात्र पनि छैनन् । अनिल पौडेल, हरिगोबिन्द लुईँटेल र नयनराज पाण्डे लगायतको संचालक समिति र सहयोगी कर्मचारीको साथबाटै निरन्तर काममा लाग्न सकेको अनुभव झासंग छ ।
Anonymous 1 November 2013 at 23:49
Nikkai bujhnu bhayeko raicha sajha hajur le. ajhhai ghairiyera bujhidinu bhaye ramro hune thyo.